Powder Hemihydrate Hemihydrate Lorcaserin Hydrochloride (856681-05-5) Phcoker
Ny vovo-dronono Lorcaserin hydrochloride hemihydrate dia …….
Rojo Lorcaserin hydrochloride hemihydrate poids (856681-05-5) video
Product Name Rohoho Lorcaserin hydrochloride hemihydrate poids
Anarana simika (R) -8-chlor-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine-hydrochloride-hemihydrat; (R) -8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1h-3-benzazepine-hydrochloride-hemihydrat
molekiolan'ny Formula C22H32Cl4N2O
molekiolan'ny Wvalo 482.31
Ny antsasaky ny biolojia Ny mpikaroka dia manana fiainana lavalava plasma amin'ny ~ 11 ora
Solubility Solubility amin'ny rano 0.0709 mg / mL
Storage Temperature Tsy misy angona azo atao
Application Vovo-dronono Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ampiasaina ho fanafody fanoherana ny hatavezina. Izy io dia manana anjara asa amin'ny maha-depressant depression sy agonist an'ny serotonergika.
Roahina Lorcaserin hydrochloride hemihydrate poids (856681-05-5) Description
Ny hydrochloride hydrochloride hodihehydrate ny vovoka dia hydrates izay endrika hemihydrate lorcaserin hydrochloride. Nampiasaina ho zava-mahadomelina manohitra ny fiterahana. Manana andraikitra amin'ny maha-tendron-drivotra azy sy ny agonist serotonerika izy io. Misy hydrochloride lorcaserin.
Roahina Lorcaserin hydrochloride hemihydrate vovoka dia ampiasaina amin'ny fikarakarana ny atin'ny rajako mifandray amin'ny cholesterol avo, ny tosidra ambony, na ny karazana 2 diabetika.
Ny FDA dia nankasitraka ny vovoka hydrochloride Raw Lorcaserin hohohyhydrate ho an'ny olona izay mibaribary (miaraka amin'ny endriky ny vatana, na BMI, ny 30 na ambony) na iza loatra ny be loatra (amin'ny BMI amin'ny 27 na ambony) ary koa farafaharatsiny iray lanjany- ny fahasalamana mifandraika amin'ny aretina toy ny diabeta Type 2, ny tosidra ambony na ny kolesterola avo lenta.
Raw Lorcaserin hydrochloride hemihydrate ny vovony miasa amin'ny fitantanana ny fiankinan-doha - indrindra amin'ny fampidirana ireo mpandray ny atidoha ho an'ny serotonin, mpandoro ny neurotransmitter izay manakorontana ny fahatsapana sy ny fahafaham-po. Ny serotoninina koa dia mandray anjara amin'ny toe-tsaina; Maro ny fanafody fitsaboana ataon'ireo antidepressant amin'ny alàlan'ny fisorohana ny fitsaboana amin'ny serotonine ary ny fitazomana ny atidoha ao anaty chimique. Ny mpikaroka ao amin'ny Arena dia milaza fa ny zava-mahadomelina dia natao hanadiovana ny serotonin-receptors izay mahakasika ny fiankinan-doha.
Lorcaserin hydrochloride hemihydrate vovoka (856681-05-5) Mekanisma asa
Mieritreritra ny hampihena ny fihinanana sakafo i Lorcaserin ary mampiroborobo ny fihomehezana amin'ny fidirana an-tsokosoko ireo mpanolo-tsaina 5-HT2C amin'ny neuron neurons pro-opiomelanocortin izay hita ao amin'ny hypothalamus. Tsy fantatra ny fomba fiasa mihetsika.
Ny mpikaroka ao amin'ny dosage voatondro isan'andro dia mifamatotra amin'ny fifandraisana 5-HT2C raha oharina amin'ny mpikirakira 5-HT2A sy 5-HT2B (jereo ny Table 5), ny mpanonta mpanonta 5-HT hafa, ny mpanotrona mpanangona 5-HT, ary ny tranonkalan'ny xNUMX-HT .
fampiharana ny hormochloride hydrochloride humeurhydrate (856681-05-5)
Appetite mampihorohoro: Agent izay ampiasaina mba hampihenana ny fiankinan-doha.
Agonist serotonerika: Ny mpitsabo manana fifandraisana amin'ny mpandray ny serotonin ary afaka manova ny vokatry ny serotoninina amin'ny fanentanana ny fikarakarana ara-batana amin'ny selan'ny receptors. Ireo agonista serotonin dia ampiasaina ho antidepressants, anxiolytics, ary amin'ny fitsaboana aretina mikraine.
Recommended Loraxine hydrochloride hemihydrate powder (856681-05-5)
Satria tsy hita ny fampahalalana voakasika momba ny fampiasana hemicrator ny hydrochloride Lorcaserin, ny haino aman-jery manaraka ihany dia tsy inona fa:
Lasan-dipoavatra HCL 846589-98-8 dia tonga amin'ny takelaka takelaka ary nalaina amin'ny 1-2 in-droa isan'andro, na tsy misy sakafo. Ny mpivady tsy maintsy ampiasaina miaraka amin'ny sakafo mihinana kaloria sy ny drafitra fanatanjahan-tena.
Ny doka nomen'ny lorcaserin dia ny 10 mg izay ampiharina am-bava indroa isan'andro. Ny mpivarotra dia azo alaina tsy misy fihinanana sakafo. Ny mpivady dia tokony hajanona amin'ny marary izay tsy mahatratra farafahakeliny 5% ny fahaverezan'ny lanjany isan-kerinandro 12 satria tsy voan'ny aretina ireny aretina ireny raha oharina amin'ny fitsaboana mitohy.
soa azo avy amin'ny Lasan-kiraro hydicarboride (hormochloride) hehyhyhydrate (856681-05-5)
Ny hormonina HYHIHYRIDE HYDROCHRIDE HYDY HYDYDRATES dia mpanolontsaina 5-HT2C ny agonista mpikirakira izay heverina fa hampihena ny tsimok'aretina amin'ny alalan'ny rafitra afovoan'ny POMC. Lozisiana HCL vovoka:
Ny hormonina halohydrate solidaidinina dia ampiasaina miaraka amin'ny sakafo ary fampiasana fanafody ho an'ny matavy.
Ny hodi-jiro hodi-jiro hodiandro dia ampiasaina indraindray mba hikarakarana ny atody mety ho voan'ny diabeta, ny kolesterola avo, na ny tosidra ambony.
Ny tsy fahampian-tsakafo hodihezandriam-pandraharahana Lorcaserin dia tsy hanaraka ny fahasalamana fototra (toy ny aretim-po, diabeta, tosidra ambony).
Side effects ny hormochloride hydrochloride humeurhydrate (856681-05-5)
Ny vovo-dronono Lorcaserin hydrochloride hemihydrate dia ampiasaina amin'ny fitsaboana ny fitantanana lanja mavesatra amin'ny olon-dehibe miaraka amin'ny index body (BMI) 30 na mihoatra (matavy) ho fanampin'ny sakafo sy fampihenana kaloria. Izy io koa dia ekena ho an'ny olon-dehibe manana BMI 27 na mihoatra (matavy loatra) ary manana farafaharatsiny farafaharatsiny mifandraika amin'ny lanjany toy ny tosidra (hypertension), na kolesterola avo (dislipidemia). Na izany aza, mety misy vokany hafa ihany koa io. Toy ny etsy ambany:
TNy vokany mahazatra indrindra:
Ny tsy fahita matetika, fa ny fiantraikany ratsy amin'ny lorcaserin dia: